Ngo-Februwari 2019, Mnu Lin Yuanzhong, owayesakuba ngumqeshwa we-Changheng Inkampani, ngelishwa waphathwa ngumhlaza wemiphunga. Inkokeli yenkampani yazisa bonke abasebenzi kwiqela le-WeChat lenkampani kwaye yenza umnikelo ngokukhawuleza. Abasebenzi nabo bathathe inxaxheba kwiminikelo nakwintsikelelo yomyalezo. Ibonakalisa ukuvumelana kunye nobuhlobo babasebenzi baseChang Heng.
Kumnyhadala weNtwasahlobo ka-2020, ukuze kuliwe ne-COVID-2019, Inkampani yaseChangheng ifumene imiyalelo kurhulumente ofanelekileyo ukuba alungiselele ukuqala kwakhona kwemveliso kwangaphambili. Ukungabikho kwezixhobo kunye nabasebenzi, uMnu.Ge Bingda, usihlalo wenkampani, usebenze imini nobusuku ukulungelelanisa imveliso. Abasebenzi abakude nabo boyisile ubunzima, bebeka ubomi babo emngciphekweni, ngeendlela ngeendlela, babuyela kwizithuba zabo.
Inkampani yaseChangheng yanikwa isihloko seshishini elihlawula irhafu eShanghai. Oku kukuqinisekiswa kwetekhnoloji ye-Changheng, kodwa kunye nokubuya kwabo bonke abasebenzi base-Changheng kuluntu. Kwi-8 ye-China (i-Shanghai) yeTekhnoloji yoThengiso lwaMazwe ngaMazwe kunye ne-Export Fair, iimveliso zethu ziye zamkelwa ngumgangatho womoya waseTshayina nowamagcisa udliwanondlebe neengxelo.
UXu Yingchun, umlawuli weSebe leLebhu leSibhedlele i-Peking Union Medical College, wathi kudliwanondlebe ekupheleni kuka-2020: “Kweminye imimandla, ii-PCR detectors kunye ne-nucleic acid extractors zikhona, kwaye neelebhu ze-PCR sele zimisiwe. Kodwa ke, eyona nto ibalulekileyo kukuqeqesha abasebenzi kwezobuchwephetsha abanokumelana nalo bhubhane. ” Ngaba ibalulekile loo nto.